Delta Air Lines waxay ku daraysaa 36 dayuuradood oo Airbus iyo Boeing ah oo loo adeegsado raxan iyadoo ay kordheyso baahida safarka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Delta Air Lines waxay ku daraysaa 36 dayuuradood oo Airbus iyo Boeing ah oo loo adeegsado raxan iyadoo ay kordheyso baahida safarka
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Faafida COVID-19 waxay siisay fursad lagu fududeeyo maraakiibta Delta isla markaana la dardargeliyo hawlgabnimada 18 qof oo ballaaran 777s, iyo MD-88 iyo MD-90 maraakiibta cidhiidhiga ah, dhammaantoodna way weynaadeen oo waxtarkoodu yaraa.
Faafida waxay siisay Delta fursado ganacsi oo gaar ah si loogu daro diyaarado jiil cusub oo qiimo soo jiidasho leh.
Delta waxay ku dartay inay ku darto 29 isticmaalay Boeing 737-900ERs iyo 7 isticmaalay Airbus A350-900s si ay u raacaan maraakiibta.
Dib -u -cusboonaysiinta maraakiibta ballaadhan waxay qayb ka tahay soo -kabashada Delta, waxayna gacan ka geysan doontaa sidii Delta loogu heli lahaa macaash joogto ah iyo kobaca mustaqbalka.
Delta Air Lines waxay gashay heshiisyo lagu darayo 29 la isticmaalay Boeing 737-900ERs iyo kiraysiga toddoba ayaa la isticmaalay Airbus A350-900s maadaama ay sii waddo hagaajinta iyo casriyeynta maraakiibteeda. 36ka diyaaradood ee dheeraadka ah waxay hagaajin doonaan hufnaanta shidaalka waxayna kor u qaadi doontaa khibradda macmiilka, iyada oo taageeri doonta istaraatiijiyadda cusboonaysiinta maraakiibta Delta oo diiradda saareysa fududeynta, baaxadda, baaxadda iyo joogtaynta.
“Diyaaradahaani waa maalgashi mustaqbalka Delta,” ayuu yiri Delta Air Lines Maamulaha guud Ed Bastian. "Markaan fiirineyno masiibada, Delta edbinta, habka hal -abuurka leh ee dib -u -cusboonaysiinta maraakiibta waxay noo haysaa koritaan marka dalabka socdaalku soo laabto, iyada oo kor loo qaadayo waayo -aragnimada macmiilka iyo taageeridda ballan -qaadyadayada waara."
Faafida COVID-19 waxay siisay fursad lagu fududeeyo maraakiibta Delta isla markaana la dardargeliyo hawlgabnimada 18 qof oo ballaaran 777s, iyo MD-88 iyo MD-90 maraakiibta cidhiidhiga ah, dhammaantoodna way weynaadeen oo waxtarkoodu yaraa. Faafida ayaa sidoo kale bixisay fursado ganacsi oo gaar ah si loogu daro diyaarado jiil cusub oo qiimo soo jiidasho leh.
Dib -u -cusboonaysiinta maraakiibta ballaadhan waxay qayb ka tahay soo -kabashada Delta, waxayna gacan ka geysan doontaa sidii Delta loogu heli lahaa macaash joogto ah iyo kobaca mustaqbalka. Markay tahay diyaaradda calanka Delta, A350 waxay bixisaa khibrad macmiil oo heer caalami ah, waxay kor u qaadaa awoodda xamuulka, waxay yaraysaa kharashyada cutubka waxayna gacan ka geysataa mustaqbal waara.
Jiilka soo socda A350s waxay ku gubtaa 21 boqolkiiba shidaal ka yar halkii kursi marka loo eego 777-kii ay beddeleen. Hufnaanta shidaalka oo la hagaajiyay ayaa ahmiyadda u leh dadaallada Delta ee lagu yareynayo qiiqa kaarboonkeeda iyo Duulimaadkeeda ku socda Net Zero. Helitaanka 29 cidhiidhi ah 737-900ERs ayaa sidoo kale dhammaystiraya maraakiibta Delta ee hadda jira.
Delta waxay kiraysan doontaa A350s iyada oo loo marayo AerCap waxayna ka iibsan doontaa 27 ka mid ah 737-900ERs lacag ay maamusho Castlelake, LP, halka labada soo hadhay ee 737-900ERs laga maalgelin doono miisaaniyad ay sidoo kale maamusho Castlelake, LP Labada macaamilba waxay ku xiran yihiin xaaladaha xidhitaanka. Bixinta diyaaraddan ayaa la dhammaystiri doonaa rubuca hore ee 2022, waxayna geli doonaan adeegga ka dib marka wax laga beddelo.
Marka lagu daro toddobada A350s ee qayb ka ah ogeysiiskan, Delta hadda waxay leedahay 15 A359s oo adeeg ah iyo 20 amar ah. Ku-darka 29 737-900ERs waxay wadarta guud ka dhigaysaa 159 maraakiibteeda.
Heshiiska ayaa daba socda go'aankii Delta bishii Abriil si ay u adeegsadaan xulashooyinka 25 dayuuradood oo dheeraad ah oo ah A321neo, kuwaas oo bilaabi doona inay keenaan sanadka soo socda. Diyaaradahaasi waxay bixiyaan kharashka kursiga ugu hooseeya ee maraakiibta Delta.